Dowlada Puntland oo 1-da December Bilaabaysa Dardargalinta Cashuuraha. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Dowlada Puntland oo 1-da December Bilaabaysa Dardargalinta Cashuuraha.
Dowlada Puntland oo 1-da December Bilaabaysa Dardargalinta Cashuuraha.
Shirkii Gollaha xukuumadda dowladda Puntland oo uu shir guddoominayay Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland C/xakiim X. Cabdullaahi Camay ayaa looga hadlay arrimaha amniga dalka, Xaaladda abaaraha, Dar-dargelinta Canshuuraha Bariga iyo Mideynta laamaha socdaalka Puntland.
Gollaha xukuumadda waxay warbixin ka dhageysteen wasaaradda amniga Puntland oo ka warbixiysay dhacdooyinka amniga ee dalka iyo hawl-galo ay wadaan ciidamada Puntland meelo ka mid ah buura-leyda Gal-gala.
sidoo kale goluhu wuxuu ka dooday xaaladda xuduudaha Puntland, gaar ahaan ka hortagga ururka al-shabaab oo ay laamaha Amnigu xubno ka mid ah ku qabteen xuduudaha dalka iyo la dagaalanka maandooriyaha oo marmarka qaarkood ka imaanaya xuduudaha dowladaha la deriska ah Puntland.
Shirka waxaa kaloo looga hadlay arrimaha abaaraha, waxaana la tilmaamay in roobkii deyrtu uu aha aroob aan ku filneyn dalka, waxaana lagu qiyaasay 30% dhammaan roobkii da’ay, taasoo keeni doonta in dadka xoolo dhaqatada ahi ay soo wahayaso xaalad adag.
“Golluhu wuxuu caddeeyaan in degaamada Puntland qaar ka mid ah ay xaaladoodu tahay qaylo-dhaan, waxayna golluhu u xilsaareen arrinta abaaraha Wasaaradaha arrimaha guddaha, wasaaradda qorshaynta iyo Hay’ada Hadma” ayaa lagu yiri warsaxafadeedka ka soo baxay shirka gollaha wasiirada oo sidoo kale lagu sheegay in xaalad abaarta ee dalka ay u baahan tahay in loo diyaar garoobo.
Dhinaca kale, shirka gollaha xukuumadda waxaa lagu sheegay in 1da bisha December ee soo socota dawladu bilaabi doonto dardargelinta canshuuraha Biriga, gaar ahaan canshuuraha qadaraasleyda, Gaadiidka iyo canshuuraha Iibka, waxaana golluhu u xilsaaray hawsha kicinta Canshuuraha Biriga Wasaaradaha kala ah Wasaaradda Maaliyada , Wasaaradda Arrimaha gudaha, Wasaaradda hawlaha guud iyo Wasaaradda Amniga.
Toddobaadkii hore, gollaha wasiiradu waxay meelmariyeen miisaaniyadda Puntland ee 2018ka oo ku talgalkeeda lagu qiyaasay 92 Milyan oo dollar, Miisaaniyada ayaa aad uga yar miisaaniyadii sanadkan 2017ka oo ahayd 160 Milyan oo dollar
Gabagabadii, Gollaha wasiiradda Puntland waxay guddi gaar ah u xilsaareen mideynta laamaha socdaalka dalka si loo fududeeyo shaqada loo hayo ummada.